mushaTHE WORLDzvekuEurope48 PolandChitima Kupwanya muPoland
14 / 01 / 2020 48 Poland, zvekuEurope, THE WORLD, Railway, GENERAL, musoro wenyaya, VIDEO
MuPoland, mutyairi weoriori rakatakura wekuchera akatyora chipinganidzo cheiyo danho rekuyambuka ndokuyedza kuyambuka njanji ndokurova chitima muarera yake. Iyo nguva yengozi yakaratidzwa mukamera yekuchengetedza.
Chiitiko ichi chakaitika muZbaszyn muGreater Poland Voivodehip kumadokero kwePoland. Iyo tsoka inorekodwa nechitima chengetedzo kamera inoratidza kuti rori inotakura muchina unorema inopwanya nepamharadziro yakavharidzirwa uye inopinda muganho kuyambuka. Mifananidzo yacho inoratidza kuti chitima chinosvika nekukurumidza chinokanganisa trekita, yave kuda kuzopedzisa ndima yayo, uye inotenderera nemuchina unorema munzira.
Mune tsaona, machina maviri echitima akakuvara, mutyairi welori akapona pachiitiko ichi asina kukuvadzwa. Mota, rori uye njanji zvakakanganiswa mutsaona.
Vakuru, vatyairi vanogona kudzivirirwa 1 min sabretmesiyle tsaona hombe, chiitiko chinofanira kucherechedzwa mumirairo, akadaro.
Kuziviswa kweiyo nyoro: 1 mupakati wemusatan ari padanho rekuyambuka uye gumi chikamu mukuyambuka…
On Level Crossing Hit Train Station (Vhidhiyo)
Dzidzisai Afyonkarahisar Slammed On Bus Pamutambo Crossing (Video)
2 yakakuvadzwa muchitima ichirova motokari pamwero wokuyambuka
1 Yakarohwa MuTeen Truck Pamutambo Crossing
2 Vakakuvadzwa Nenzira Kuenda Kumutambo Crossing
2 Yakakuvadzwa Mukurovedza MuUsak Train Yakarohwa MuNhamba Kupfuura (Video)
Dzidzira paanenge achiyambuka nejini inomira mumotokari, 4 yakakuvara
1 Yakakuvadzwa neToriki Pasi Yekutengesa Nharaunda Yakavakuvadzwa
Dzidzira pakuyambuka kwegwagwa wakawira motokari 2 yakafa, 2 yakakuvara
2 Vakafa, 4 Kukuvara
Cide Kudzidzisa kuputika muHatayda Level Crossing
Terezi yakakandwa mumotokari pamwero wekuyambuka
Chitima Ridza Iyo Turakiti Kuitakura Anorema Zvigadzirwa Pa Level Kuyambuka
Sakarya SGK Shandurudzo Yepasiripo Yakatangwa
IMM SözcüNhema kuna Murat Turhan's Metro Kutaurisa kubva kuna Minister Murat Ongun